Fikri Apk 2022 misintona ho an'ny Android [sarimihetsika maimaim-poana] | APKOLL
Kivy ve ianao, mijanona ao an-trano tsy manao na inona na inona, ary te handany fotoana tsara? Raha eny, dia jereo ity fampiharana Android farany ity dia fantatra amin'ny anarana hoe Fikri Apk. Manolotra sarimihetsika farany, andiany amin'ny fahitalavitra Bollywood, Hollywood, sy ny hafa.
Araka ny fantatrao dia misy fampiharana maro hafa eny an-tsena, izay manolotra serivisy mitovy amin'izany. Saingy manome sosokevitra an'ity app ity izahay satria misy endri-javatra maro izay tsy misy ao amin'izy ireo. Noho izany mijanona miaraka aminay mandritra ny fotoana fohy ary hizara ny momba an'ity rindranasa ity izahay.
Topimaso momba an'i Fikri Apk
Izy io dia fampiharana Android Entertainment, izay manolotra fomba fialamboly tsara indrindra. Manolotra sarimihetsika, andiany amin'ny fahitalavitra, ary maro hafa maimaim-poana izy io. Araka ny fantatrao dia tsy maintsy mandoa vola tena izy ianao hijerena sarimihetsika vaovao amin'ny Internet, fa amin'ny fampiasana an'io fampiharana io dia afaka mandefa maimaim-poana ianao. Tsy mila mandany ariary iray akory ianao.
Araka ny fantatrao amin'ny streaming an-tserasera dia tsy maintsy manana fifandraisana Internet haingana, fa mampiasa izany Sarimihetsika App, tsy mila Internet haingana ianao. Izy io dia manome serivisy roa haingana, izay afaka mandeha amin'ny Internet ambany. Afaka mandefa horonan-tsarimihetsika mora amin'ny Internet ambany ianao.
Ny fampisehoana kalitao no tena antony, manolotra ity fampiharana ity izahay. Izy io dia hanitsy ny kalitaon'ny fampisehoana. Raha mampiasa Internet haingana ianao dia hanitsy ny fanapahan-kevitra amin'ny HD avo lenta, fa raha ambany ianao dia hampidina ny fampisehoana kalitao.
Ireo sokajy dia voafaritra tsara ao amin'ity rindrambaiko ity. Afaka mahita karazana fialamboly amin'ny sokajy misy azy ianao. Azonao atao koa ny mampiasa ny bara fitadiavana hahitanao ny sarimihetsika ankafizinao amin'ny fanoratana ny teny fanalahidy na anarana lehibe. Manolotra fidirana mora amin'ny endri-javatra rehetra izy io.
Ny sokajy ankizy dia misy ihany koa ho an'ny ankizy, izay ahitanao ny ankamaroan'ny sarimihetsika anime sy andian-tantara amin'ny fahitalavitra. Araka ny fantatrao, ny ankizy dia mianatra bebe kokoa amin'ny zavatra manintona ary ny animation dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hampianarana ny zanakao. Saingy tsy maintsy manara-maso ny zaza ianao satria manome votoaty ho an'ny olon-dehibe ihany koa.
Anaran'ny fonosana info.techinformationgies.fikri
Endri-javatra lehibe Fikri App
Araka ny efa nolazainay ny sasantsasany amin'ireo fiasa ao amin'ilay fizarana etsy ambony, saingy misy bebe kokoa. Noho izany, hizara azy ireo amin'ny lisitra etsy ambany izahay. Azonao atao koa ny mizara traikefa manokana aminay amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra, aza misalasala mampiasa ny fizarana fanehoan-kevitra.
Sarimihetsika farany, andian-tantara amin'ny fahitalavitra, sns
Tsia, tsy ara-dalàna ny fampiasana azy. Manolotra atiny maimaimpoana maimaimpoana izy io, noho izany tsy ara-dalàna ny fampiasana azy. Azonao ampiasaina soa aman-tsara ity rindranasa ity satria tsy mila kaonty na zavatra hafa toa izany. Noho izany, ampidino fotsiny ity rindranasa ity ary jereo izay tianao.
Ahoana ny fampidinana Fikri Apk?
Araka ny fantatrao, Google Play Store dia tsy manohana ny fampiharana tsy ara-dalàna. Noho izany, sarotra be ny mahita ireo karazana fampiharana miaraka amin'ireo fiasa marobe. Aza matahotra anefa, hizara rohy azo antoka aminao izahay, tadiavo fotsiny ny bokotra fampidinana ary kitiho eo.
Hanomboka ho azy ny fisintomana, raha vao tsy maintsy manindry ny bokotra ianao.
Ny fametrahana ny rakitra Apk dia tsy zavatra sarotra atao, fa ho anao rehetra kosa dia hizara ny fizotrany amin'ireo dingana etsy ambany izahay. Araho ny dingana ary azonao atao ny mametraka azy tsara amin'ny fitaovanao.
Alefaso ny 'Source tsy fantatra' ary ny fivoarana
Tsindrio ilay rakitra Apk alaina ary safidio ny Safidy fametrahana
Fikri Apk no fampiharana Android tsara indrindra, izay manolotra ny fomba fialamboly rehetra mety ho an'ny mpampiasa. Afaka mandany ora maro amin'ny sarimihetsika tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra ianao.
Raha manana olana amin'ny fampiasana an'ity fampiharana ity ianao dia aza misalasala mifandray aminay. Hataonay izay hamahana ny olanao haingana araka izay tratra. Ho an'ny fampiharana mahatalanjona kokoa dia mitsidika hatrany ny anay Website.
Sokajy Apps, Entertainment Tags Opinions, Fikri Apk, Fikri App, Movie App Post Fikarohana